လွတ်လပ်သောကြားနေစာရင်းစစ် | FLEGT
လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ခြင်းသည် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး (VPA) တိုင်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တရား ဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်ကဏ္ဍအားလုံးသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နေသည်ကို စစ်ဆေး ရန်ဖြစ်သည်။ VPA တစ်ခုစီ၏ နောက်ဆက်တွဲသည် စာရင်းစစ်သူများအတွက် သတ်မှတ်တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပေးထားသည်။ စာရင်းစစ်များ၏ အစီရင်ခံစာသည် VPA ပူးတွဲအကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီအတွက် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေ ရန် နည်းလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံ၏ အစိုးရသည် လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ကို EU နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ ခန့်အပ်ပြီး လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ် နှင့်ပတ်သက်သော VPA နောက်ဆက်တွဲတွင်ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်းဖြစ်ရမည်။ နောက်ဆက်တွဲတွင် စာရင်းစစ်သည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ အုပ်ချုပ်မှုတွင်ပါဝင် သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များကင်းလွတ်ရမည်ဟုရှင်း လင်းစွာဖော်ပြထားပါသည်။ လက်မှတ် ထိုးထားသော VPAs များသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ (ISO) အတိုင်း စာရင်းစစ်သည့် ကျွမ်းကျင်သည့် စာရင်းစစ် အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရင်းစစ်ချက်များလိုအပ်သည်။
လွတ်လပ်သောကြားနေစာရင်းစစ်အပေါ် နောက်ဆက်တွဲများသည် လွတ်လပ်သောကြားနေစာရင်းစစ်အတွက် ကိုးကားချက်များကို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် စာရင်းစစ်တစ်ယောက်မှ မည်သည့်အချိန်တွင် မည်ကဲ့သို့ စစ်ဆေးခြင်း၊ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်းတို့ပါ၀င်သည်။
စာရင်းစစ်၏အခန်းကဏ္ဍ သည် နိုင်ငံများအလိုက်ကွဲပြားသည်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည်။
VPA အရ စနစ်သည်ဖော်ပြထားသည့် ဆောင်ရွက်ရန်အလုပ်များကို ဆောင်ရွက်နေသည်ကို စစ်ဆေးရန် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ကဏ္ဍ များအားလုံးကိုအကဲဖြတ်ခြင်း
တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ ဖြစ်နိုင်သည့် ဟာကွက်များကို ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း
ပြုပြင်ပေးသည့် အတိုင်းအတာများ၏ ထိရောက်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း
ဒေတာ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်အား မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေခြင်း ရှိမရှိကို ပြန်လှန်သုံးသပ် စစ်ဆေးခြင်း
လိုင်စင်ရသစ်များကို EU ဈေးကွက်သို့တင်ပို့သည့် EU လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လှန်သုံးသပ် စစ်ဆေးခြင်း
ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် သစ်တရားဝင်ဖြစ်မှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် လိုအပ်ချက်များနှင့် သေချာစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်သည်ကို စစ်ဆေးခြင်း
ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါ၀င်သည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အေဂျင်စီများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို စစ်ဆေးခြင်း
အာဏာပိုင်များအနေနှင့် တင်ပြလာသည့် ကွဲလွဲချက်များကို ဖြေရှင်းရာတွင်မည်မျှ ဆီလျှော်သနည်းကို စစ်ဆေးခြင်း
စောဒကတက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲသည့် ယန္တရားမည်မျှ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိ၊ မရှိနှင့် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်နှင့် သို့မဟုတ် လွတ်လပ်သောကြားနေ စာရင်းစစ်ခြင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူတို့ နစ်နာမှုအပါအဝင် စစ်ဆေးခြင်း
ကူးပြောင်းသစ်ကို ခြေရာခံသည့် စနစ်အား စစ်ဆေးခြင်း
EU မှ လက်ခံရရှိသော FLEGT လိုင်စင်ပါ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးလိုက်သည့် FLEGT လိုင်စင်ပါ သတင်းအချက်အလက်များ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း
လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်သည် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေ သော ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများထံမှ သတင်းအချက် အလက်များကို ရှာဖွေသည်။ အချို့ VPAs များတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအနေနှင့် လွတ်လပ် သောစာရင်းစစ်များကို သတင်းအချက်အလက်များ မိမိအစီ အစဉ်ဖြင့်ပေးနိုင်သည်နှင့် ပေးသင့် သည်ကို တိကျစွာဖော်ပြထားသည်။ အချို့ VPAs များတွင် လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာ သူများအဖြစ် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖန်တီးပေးထားသည်။ "လွတ်လပ်သော စာရင်း စစ်ခြင်းနှင့် လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း" တွင်ကြည့်ပါ။
လွတ်လပ်သော ကြားနေစာရင်းစစ်ခြင်းနှင့် လွတ်လပ်သည့်ကြားအဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း
အချို့ VPAs များသည် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ခြင်းအပြင် လွတ်လပ်သည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုပါအသိအမှတ်ပြု လက်ခံထားပါသည်။ လွတ်လပ်သည့် စောင့်ကြည့်လေ့ လာသူများကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်သည် သစ်တောဆိုင်ရာဒုစရိုက်မှု များကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများသည် ဥပဒေကိုလေးစား လိုက်နာမှု ရှိမရှိ အကဲဖြတ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းအစား စာရင်းစစ်တစ်ယောက်သည် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ် တစ်ခုလုံးနှင့် ၎င်း၏တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုဖြည့်ဆည်း ပေးရန် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အာရုံစိုက်ရမည်။ လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့် လေ့လာ ခြင်းအကြောင်းကို ပိုမိုသိလိုပါက VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကား စရာများ ၏ VPA စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အခန်းတွင်ကြည့်ပါ။
စာရင်းစစ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်း အကြိမ်အရေအတွက်
EU နှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစဉ်တွင် စာရင်းစစ်ခြင်းအကြိမ်ကို သဘောတူ ညီကြ သည်။ ယနေ့အထိ VPAs အများစုတွင် စာရင်းစစ်ခြင်းကို မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် အနည်းဆုံး ၆ လ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်း စတင်ပါက စာရင်းစစ်ခြင်းကို နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သွားကြသည်။ စာရင်းစစ်များသည် ရုတ်တရက် စစ်ဆေးခြင်း များလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စာရင်းစစ်များသည် အစီရင်ခံစာကို EU နှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြသည်။ အစီရင်ခံစာများ၏ အကျဉ်း ချုပ်များကို အများပြည်သူ သို့ ထုတ်ပြန်သည်။
VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော ကဏ္ဍများ၏ လွတ်လပ်သောစာရင်း စစ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲတွင်ကြည့်ပါ။
အချို့ VPAs များတွင် လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ခြင်းကို အခြားအမည်များဖြင့်ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဂါနာတွင် လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ခြင်းကို "လွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း"ဟု ခေါ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှား တွင်"အချိန် အပိုင်းအခြားအလိုက် ဆန်းစစ်ခြင်း"ဟုခေါ်သည်။ ဤခြားနားသော အမည်များရှိနေသော်ငြား လည်း အခြေခံသဘောတရားမှာ အတူတူပင် ဖြစ်သည်။
တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ် များ
လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲ
Brack, D. and Leger, C. 2013 Exploring Credibility Gaps in Voluntary Partnership Agreements. A Review of Independent Monitoring Initiatives and Lessons to Learn. Independently published. [PDFဒေါင်းရန်]